International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Briefing Paper: Another Piece of the Democratic Puzzle - Reform of the Administrative Structure of Myanmar Essential
Briefing Paper: Another Piece of the Democratic Puzzle - Reform of the Administrative Structure of Myanmar Essential
Another Piece of the Democratic Puzzle
Reform of the Administrative Structure of Myanmar Essential
Progressive Voice releasesanew briefing paper that underlines the necessity to reform the administrative structure of Myanmar, specifically the General Administration Department (GAD). The GAD is under the remit of the military-controlled Ministry of Home Affairs and has far-reaching power over the day to day administration and governance of people's lives throughout the country. The Myanmar Army's unelected control over the GAD falls outside the responsibility that is typical foramilitary operating underatruly democratic government.
Thus, reform of the GAD, including placing the department under civilian control, decentralizing power to community level and increasing local level participation underafederal system of governance is an essential part of democratic reforms in Myanmar, along with the drastic amendment, if not rewriting, of the military-drafted 2008 Constitution.
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၀
မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အထူးသဖြင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအား ပြုပြင် ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေမှုအပေါ် အကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ဖော်ပြထားသည့် စာတမ်းတိုတစ်စောင်ကို ရှေ့ပြေးအသံ အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန စစ်တပ်မှ အပြည့်အ၀ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်ရှိပြီး ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ နေ့တဓူဝ ဘ၀များအပေါ် အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် တိုင်းပြည်အနှံ့ လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် လက်လှမ်းမီ ထိရောက်သည့် အာဏာလည်းရှိနေပါသည်။ မြန်မာစစ်တပ်မှ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနအပေါ် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် မဟုတ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီနှင့် မကိုက်ညီသည့် ထိန်းချုပ်မှုသည် စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတစ်ရပ်အောက်တွင် စစ်တပ်တစ်တပ်မှ သမားရိုးကျ ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်၏ ပြင်ပတွင် ကျရောက်နေပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့်လျော်ညီစေရန် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအား အရပ်သားထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိရေး၊ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကို ဒေသန္တရအဆင့်သို့ လျှော့ချရေးနှင့် ဒေသန္တရအဆင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တိုးမြှင့်ရေးတို့အပါအ၀င် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးသည် စစ်တပ်မှဦးစီးရေးဆွဲထားသည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား အသစ်ပြန်လည် ရေးဆွဲရေး သို့မဟုတ် ထိထိရောက်ရောက် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးတို့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၌ မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အောင်ခိုင်မင်း၊ ယာယီတာဝန်ခံ၊ ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့
akm@progressive-voice.org | info@progressive-voice.org